Ukuzijabulisa Komndeni Kokudoba
Indawo yokuphumula yomndeni ephelele echibini elihle lapho izingane ziqinisekile ukuthi zizobamba izinhlanzi. Ungase ungafuni ukuhamba, kodwa uma uphuma, izindawo zolwandle ziqhele ngemizuzu engu-45 kuphela okuhlanganisa i-Destin, i-Pensacola, i-Okaloosa Island ne-Navarre. Sitholakala kwamakhelwane nganoma yiluphi usizo ongase uludinge. Sicela uqaphele, kukhona izinja, amakati nezinkukhu endaweni/eduze kwesakhiwo.
Leli yikhaya elihle kakhulu eliyi-modular elifakwe ngokuphelele. Kukhona indawo yokuhlala yangasese kanye nendlu yesihlahla, ama-slide nama-swing ezintambo ukuze izingane zidlale. Idokodo labelwa umndeni osihambisile nokho, sivamise ukuba khona ukuze nje siphakele izinhlanzi. Ukubhukuda kanye nayo yonke imisebenzi kusengozini yakho. Ukudoba kuyabanjwa futhi kuyakhululwa futhi kugcwele i-bream nama-bass.
Sitholakala kwamakhelwane futhi siyajabula ukukunikeza izinombolo zethu nganoma imiphi imibuzo noma okusikhathazayo. Sesihlale kule ndawo iminyaka engaphezu kwengu-20 futhi singakujabulela ukunikeza noma yiziphi iziphakamiso zokuhamba kosuku.
Sitholakala kwamakhelwane futhi siyajabula ukukunikeza izinombolo zethu nganoma imiphi imibuzo noma okusikhathazayo. Sesihlale kule ndawo iminyaka engaphezu kwengu-20 futhi singaku…